Hydroxypinacolone retinoate Powder Manufacturers factory
Hydroxypinacolone retinoate (dị mkpirikpi dị ka HPR), nke a makwaara dị ka retinoid granactive, bụ ihe na-akpata oxidized nke retinol, nke nwere ike jikọtara ndị natara acid retinoic (RARs) ozugbo. Ọ nwere ọrụ nke ịhazi metabolism nke mkpụrụ ndụ epidermal na stratum corneum. Ọ nwere ike belata sebum tojuru, mee epidermal pigments, gbochie akpụkpọ ịka nká, Gbochie otutu, na-acha ọcha ntụpọ, wdg. Mgbe huu ike nrụpụta, ọ na-ebelata oke iwe ya. Ka ọ dị ugbu a, a na-ejikarị ya eme ihe maka ịka nká ma gbochie nlọghachi azụ.
aha Hydroxypinacolone Retinoate ntụ ntụ
Aha aha Hydroxypinacolone na-agba ume
Synonyms Abụba-soluble HPR; HPR na-agbaze mmiri; Hydroxypinacolone Retinoate; Hydroxypinacolone Retinoate, HPR; Hydroxyl pinacone retinoate Liposome; Nke a Liposomal Hydroxypinacolone Retinoate; Mmiri retinoic
molekụla Formula C26H38O3
molekụla arọ 398.58
Ebe Boling 508.5 ± 33.0 Celsius C (Eburu amụma)
ọdịdị Agba odo ma ọ bụ kristal
Solubility anaghị edozi mmiri na mmiri, ma na-eme ka ọ dị mfe hydrolyzed n'okpuru acid siri ike na alkali
nchekwa Ọnọdụ Na-echekwa na ụlọ nkwakọba ihe dị jụụ, nke nwere ikuku. Nchekwa nchekwa ekwesịghị ịgafe 37 Celsius C. Ekwesịrị ịchekwa ya iche na oxidants na kemịkal oriri, ma zere nchekwa agwakọtara.
ngwa Ejiri dị ka antioxidant.
Ejiri dị ka ihe ndozi, antioxidant, wdg. N'ọhịa nke ngwaahịa nlekọta onwe onye.
Hydroxypinacolone Retinoate ntụ ntụ 893412-73-2 General Description
Hydroxypinacolone retinoate dị nro ma dịkwa nro karịa retinol ma enwere ike iji ya mee ihe nke ọma na ngwaahịa nlekọta anụ ahụ. Hydroxypinacolone retinoate nwere ibu molekụla buru ibu karịa retinol, yabụ akpukpo ahụ ga - eji nwayọ nwayọ banye ya, ọ ga - ewe ogologo oge ị rụpụta anụ ahụ. Hydroxypinacolone retinoate dịkwa mma maka ịgwọ ihe otutu, ebe ọ nwere ike ịgwọ melasma n'ụzọ dị irè. Hydroxypinacolone retinoate dị iche na ihe ndị ọzọ retinoic acid (retinoic acid). Ọ dịghị mkpa ka a gbanwee ya ka ọ rụọ ọrụ ozugbo. E jiri ya tụnyere retinoic acid, iwe ya na-ebelata nke ukwuu. Ọ dị mma iji gburugburu anya, ọnụego transdermal dịkwa mma. Ọ dị jụụ karịa ogige ndị ọzọ retinoic acid. Hydroxypinacolone retinoate nwere urughuru nke ihe na-erughị 100nm, nke nwere ike ịgbasa ihe na-arụ ọrụ na usoro ahụ, ma n'otu oge ahụ, ọ nwere ike banye n'ime anụ ahụ nke ọma iji rụọ ọrụ ma na-achịkwa ọnụọgụ ntọhapụ nke ihe na-arụ ọrụ.
Hydroxypinacolone Retinoate ntụ ntụ 893412-73-2 Mihe eji eme ihe Of Action
Hydroxypinacolone retinoate na-akpali mmụba na mmeghari ohuru nke sel akpụkpọ, na-eweghachite ọkpụrụkpụ akpụkpọ ahụ nke na-adịwanye nká na afọ, na-ejuputa usoro dị mma na ndọlị na anụ ahụ, ma na-echebe akpụkpọ ahụ pụọ na mmebi ọzọ site na wrinkles, ma weghachite anụ ahụ zuru ezu na ekwedo, na-eme akpụkpọ anụ na obere.
Otu uru bara uru nke Hydroxypinacolone retinoate over retinol na ihe ndị ọzọ na vitamin A bụ nke a na-ejikarị eme ihe na ihe ịchọ mma bụ na ọ dịghị mkpa ka a gbanwee ya na retinoic acid iji mejupụta ahịrị ọma, mee ka ọ dị nro, ma chekwaa anụ ahụ. Mgbe ị na-etinye ya na anụ ahụ, ọ nwere ike jikọta ya na onye nnabata ma malite ịrụ ọrụ, nke mere na mkpụrụ ndụ epidermal na anụ ahụ na-amalite ịba ụba, jupụta akara dị mma, ma mee ka wrinkles mbụ ahụ belata ma belata nchacha, meziwanye ọnọdụ akpụkpọ gị, mee akpụkpọ ahụ na-ele anya karịa kọmpat, na-egbu maramara, na-agbanwe, ị ga-adị obere.
Uzo abuo abuo nke Hydroxypinacolone retinoate bu ihe omuma ya. Nlere nrụgide nrụgide egosiwo na ọ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na akpụkpọ ahụ ruo 15h.
Hydroxypinacolone Retinoate ntụ ntụ 893412-73-2 ngwa
Mmepụta retinol, nke nwere ọrụ nke ịhazi metabolism nke epidermis na stratum corneum, nwere ike iguzogide ịka nká, nwere ike belata nsị sebum, tụgharịa pigmenti epidermal, rụọ ọrụ na igbochi ịka nká, igbochi ihe otutu, ịcha ọcha na ntụpọ ọkụ. Mgbe ị na -ahụ mmetụta dị ike nke retinol, ọ na -ebelata oke iwe ya. A na-eji ya ugbu a maka ịka nká na igbochi nlọghachi azụ.
Hydroxypinacolone Retinoate ntụ ntụ 893412-73-2 Nchọpụta ndị ọzọ
Hydroxypinacolone Retinoate ntụ ntụ ọdabara Ngwaahịa
Anti-ịka nká ngwaahịa.
Ngwa ọcha: Na -egbochi tyrosinase, na -akwalite metabolism, ma na -eme ngwangwa melanin. Akwụkwọ ahụ na -egosi na njikọta na VC dịkwa irè n'ịgwọ akpụkpọ ahụ.
Ihe otutu: Ọ bụghị naanị na ọ nwere ike belata ihe otutu, kamakwa belata mkpocha mmanụ ma mee ka pigmenti fọdụrụ na akpụkpọ ahụ belata.
Ngwaahịa sunscreen: igbochi mmụba nke ọrụ MMP nke ụzarị ultraviolet kpatara, chekwaa elastin na collagen dermal, ma melite wrinkles na akara ọma nke ọkụ ultraviolet kpatara.
 Nrụpụta ọrụ na nchekwa nke ọgwụgwọ ọnwa 12 na ngwakọta nke hydroxypinacolone retinoate na retinol glycospheres dị ka ọgwụgwọ mmezi na ndị na-arịa acne mgbe isotretinoin na-ekwu okwu. Venereol. 2017 Feb; 152 (1): 13-17.
 Ọgwụgwọ nke ihe ọkụkụ dị nwayọọ na nke nwere ntụpọ nke hydroxypinacolone retinoate, retinol glycospheres na papain glycospheres.Veraldi S, Barbareschi M, Guanziroli E, Bettoli V, Minghetti S, Capitanio B, Sinagra JL, Sedona P, Schianchi RG Ital Dermatol Venereol. 2015 Gị onwe gị; 150 (2): 143-7.
Ntụle Aniracetam: Nrọ Nootropic a Dị Mma Maka Gị?
Vitamin Kachasị Ekele C 3-O-Ethyl-L-ascorbic Acid na Ngwọta ịchọ mma
Oxiracetam Nootropics: Ihe niile I Kwesịrị Aboutmara Banyere Nootropic a n’ezinụlọ Racetam
Tianeptine ntụ ntụ (66981-73-5)
Bụrụ onye mbụ nyochaa "Hydroxypinacolone Retinoate ntụ ntụ" kagbuo zara
Astragaloside nke Anọ